Faritra " Journey-Assist - Fikambanana fitetezam-paritany
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra
Ilay planeta eto an-tany
Faritra amin'ny planeta
Tsy azo lavina fa ny planeta an-tany dia ny planeta be indrindra mianatra amin'ny masoandro ary ny hany planina onjam-pahalalana fantatra amin'ny siansa. Ity ambany ity ny fampahalalana momba ny planeta tsy manam-paharoa.
toetra mampiavaka ny
Jeografia sy ny tany
Ny tany no planeta fahatelo avy amin'ny Masoandro
samy hafa ny fananany amin'ny sisa amin'ireo planeta an'ny masoandro. Ny mpifanila trano akaiky indrindra dia i Venus sy Mars. Tsy toy ny planeta hafa nantsoina hoe andriamanitry ny angano romana, ny Tany tsirairay avy dia samy manana ny anarany manokana.
Ny vanim-potoan'ny Tany dia 4,54 miliara taona. Niorina tamin'ny fikarohana ny vatolampy sy meteorita tranainy indrindra izay nianjera teto an-tany na dia efa niforona aza ny rafitra avy amin'ny masoandro.
Ny zanabolana voajanaharin'ny tany dia ny Volana. Manao revolisiona tanteraka manerana ny tany ao anatin'ny 28 andro. Ny zanabolana lehibe indrindra dia ny International Space Station. Ny fiantraikan'ny gravitational an'ny Volana eto an-tany no mahatonga ny fiakaran'ny ranomasina.
Ny Tany ihany no planeta tokana misy ny fiainana ao amin'ny masoandro.
Ny halavam-potoana eo anelanelan'ny Tany mankany amin'ny Masoandro dia 150 tapitrisa km
Ny elanelan'ny elanelana avy amin'ny tany mankany amin'ny volana dia 384400 km
Ny fotoanan'ny revolisiona iray manontolo an'ny Tany manodidina ny axis (andro sidereal) dia 23 ora 56 minitra. 4 seg.
Ny vanim-potoanan'ny revolisiona an'ny Tany manodidina ny Masoandro (taona tropikaly) - 365,256 andro
Ny salan'isan'ny hafainganam-pandehan'ny orbital an'ny Tany dia 29,80 km / seg.
Fotoam-potoana (teboka orbital akaikin'ny Masoandro): 147,098 tapitrisa km; Aphelius (teboka lavitra indrindra amin'ny orbital amin'ny masoandro): 152,098 tapitrisa km
Ny tany no planeta fahadimy lehibe indrindra amin'ny rafitra solar.
Ny radiatera ekoatreka amin'ny Tany dia 6378,1 km, ny radius polar dia 6356,8 km.
Raha ny tena izy dia manana endrika tsy volom-biby izy, fa an'ny geoid iray. Ny planeta dia mivezivezy amin'ny lalana mankany amin'ny tsato, satria ny radius any amin'ny faritra "andilana" dia 21 km lehibe kokoa. Manazava ny zava-misy mahaliana ity: ny havoana tendrombohitra lehibe indrindra eto an-tany, raha raisina ny endriky ny Tany, tsy Chomolungma (Everest), araka ny iheverina matetika, fa ny volkano Chimborazo tsy mavitrika any Ekoatera.
Ny mari-pana eo amin'ny velaran'ny Tany dia eo anelanelan -89,2 ka hatramin'ny 56,7 ° C.
Ny velaran'ny velaran'ny Tany dia 510,072 tapitrisa metatra toradroa. km
Ny sakan'ny sakan'ny Tany dia 5,5153 grama isaky ny santimetatra toratelo.
Ny hafainganam-pandehan'ny gravitation amin'ny tany dia 9,78 m / s²
Ny habaky ny tany dia 5,9726⋅1024 kilao
Ny sosona ivelan'ny Tany dia akorandriaka iray - ny litatra, izay misy silicates indrindra. Eo ambanin'ny litefound dia ny asthenosphere, sosona somary fahalemena, hamafisina ary tanjaka ao anaty akanjo ambony. Ny tany dia misy tsiranoka mivoaka ivelany sy mafy orina anatiny.
Ny tany dia manana sahan'andriamby. Izy io dia ateraky ny hetsika ao amin'ny halalin'ny besinimaro izay mitondra sarany herinaratra. Ny magnetosfera eto an-tany dia manakana ny sombintsombin'ny rivotra avy amin'ny masoandro tsy hiampita ny tsipika ary manery azy ireo hiondrika manodidina ny tany. Mihetsika hatrany ny sahan'andriamby ary mihamalemy tsikelikely. Raha toa ka manjavona farany ny saha, dia hivadika planeta tsy misy fiainana Mars ny tany.
Ny habakabaka amin'ny tany dia ahitana ny nitrogen (78,08%), ny oxygen (20,95%), argon (0,93%) ary ny dioksida karbônina (0,04%). Ny mampiavaka ny habakabaka amin'ny Tany noho ny atin'ny oksizenina ilaina amin'ny zavamananaina velona. Ny faneren'ny atmosfera antonony amin'ny Tany (amin'ny haavon'ny ranomasina) dia rivotra 1 (101,325 kPa).
Ny sosona atmosfera amin'ny Tany dia mizara araka ny sisan-javatra, ny mari-pana ary ny firafitra: troposfur, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, exterior. Ny habakabaka dia tsy misy fetra voafaritra, manjary manjary mihena ary mivoaka ho any ivelany.
Ny fiovan'ny vanim-potoana amin'ny Tany dia vokatry ny fironan'ny planeta amin'ny orbitany amin'ny 23,44 degre. Mihena ny habetsaky ny angovo azo avy amin'ny tany ary mihamitombo.
Misy faritra dimy lehibe toetrandro: ala tropikaly malemilemy, tany efitra, zona feno rivotra, toetr'andro kaontinanta ary karazana polar.
Ny fihodinan'ny rano amin'ny natiora dia tena ilaina amin'ny fiainana eto an-tany.
Ny alon-dranomasina dia singa iray manan-danja amin'ny famoronana ny toetran'ny Tany, ary koa ny mivezivezy thermohaline noforonina noho ny fahasamihafan'ny haavon'ny rano sy ny famindrana angovo avy amin'ny alikaola avy amin'ny faritra ekoatera amin'ny polar.
Ny faritra enina dia izao no manavaka: i Aostralia sy Oceania, Azia, Amerika, Antartika, Afrika, Eropa. Ny kaontinanta (Australia, Antartika, Afrika, Eurasia, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo) dia voasasa amin'ny ranomasimbe: Atlantika, Indianina, Pasifika, Artika. Taorian'ny 2000, amin'ny maha-ranomasina fahadimy mahaleo tena azy, ny Ranomasin'ny Tatsimo dia nivezivezy, nampitambatra ny faritra atsimon'ny Ranomasimbe Atlantika, Indianina ary Pasifika.
Ny fananganana ny kontinanta dia vokatry ny hetsika tsy tapaka amin'ny hazondamosin'ny tany. Tany am-boalohany dia nisy kaontinanta iray fantatra amin'ny anarana hoe Pangea.
Any amin'ny kaontinanta dia misy renirano, farihy, rano anaty rano ary ranomandry, miaraka amin'ireo ranomasimbe ny fitrandranony, eo ho eo amin'ny 70,8% amin'ny velarantany.
Be ny tendrombohitra ambanin'ny rano, anisan'izany ny rafitr'ireo renirano, volkano ambanin'ny tany, ny làlan-dranomasina, ny fanambanin'ny rano, ny ranomasina feno ranomasina ary ny lemaka abyssal.
An-tanety, tendrombohitra, lemaka, lemaka, lembalemba ary karazana fanamaivanana hafa no mampiavaka.
Ny polin'ny Tany dia rakotra ranomandry, misy ny ranomandry ranomasina Arctic ary ny takelaka ranomandry Antartika.
Ny toerana lalina indrindra ao amin'ny ranomasina dia ao amin'ny Mariana Trench - 10 m.
Ny teboka farany ambany amin'ny tany dia ny Ranomasina Maty, 423 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina.
Honenana ny tany
8,7 tapitrisa karazana zavamananaina, ao koa ny olombelona. Isaky ny olona miaina Ny tany, tamin'ny Mey 2019 dia nahatratra olona 7,7 miliara.
Ny faritry ny Tany dia mizara ho fanjakana tsy miankina 195 na firenena 252 izay mifanerasera. Nandritra ny tantaran'ny fivoarany, ny kolontsain'olombelona dia nandroso ny teoria isan-karazany momba ny firafitry izao rehetra izao. Io ny foto-kevitra momba ny tany lemaka, ny rafitry ny geocentric eran'izao tontolo izao, ny hypotesisma Gaia, araka ny fiandohan'ny Tany dia superorganisme tokana, ny teoria momba ny fananganana an'izao tontolo izao na andriamanitra iray na maromaro.
Toetran'izao tontolo izao
Widget ny toetr'andro manerantany mifandraika tanteraka. Azonao atao ny manandrana sosona ary mahita ny trangan-javatra toetr'andro, manomboka amin'ny mari-pana sy ny rivotra, ka hatramin'ny rivodoza sy tadio. koa, azonao atao ny manakaiky ny sari-tany ary mivezivezy manodidina azy hahita ny toetrandro na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao!
Ankoatr'izay, eo amin'ny farany ambany dia misy ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso andro maromaro ary hahita hoe hanao ahoana ny toetrandro
Vaovao fampiharana mahafinaritra avy amin'ny Windy.com, ny fampiasa izay hitanao ato amin'ity widget ity dia azo alaina avy amin'ireo rohy - iOS и Android